बलिउड प्रवेशको २९ औँ वर्ष पुरा भयाे सलमान खानको – Makalukhabar.com
कुलमानको पुनर्नियुक्तिबारे किन भएन निर्णय ?
मकालु खबर	 २०७७ भाद्र ३० गते
व्यवस्था फेरियो तर पात्र र प्रवृत्ति फेरिएन !
नृप रावल	 २०७७ आश्विन ३ गते
डा.शर्माकै लाईनमा सरकार: पीसीआर परीक्षण शुल्क २ हजारमा झर्यो
मकालु खबर	 २०७७ भाद्र २८ गते
सुशान्तकी बहिनीले लेखिन् –‘आमा मेरो ऊर्जाको स्रोत,भाइ मेरो गर्व दुबै गुमाएँ
कांग्रेस महामन्त्री संक्रमणमुक्त
सरकारसँग कांग्रेसको माग : ‘डा. केसीसँग सम्वाद गरौँ’
सलमान खान,करण जौहर,एकता कपूरलगायत आठ जनालाई अदालत आउन आदेश
फेरिए संविधानका धारा, उस्तै रहे जनता सारा
जनता गहिरो दुःखमा, सरकार सत्ता–सुखमा
खाने भातै हो, जाने घाटै हो !
निःशुल्क खाना, सशुल्क चाहना !
बलिउड प्रवेशको २९ औँ वर्ष पुरा भयाे सलमान खानको
२०७४ जेष्ठ १५ गते प्रकाशित 12 0
काठमाडौं, भदौ १२ । आज सलमान खानका फ्यान निकै खुसी छन् । किनभने आज सलमान खानले बलिउड प्रवेशको २९ औँ वर्ष मनाइरहेका छन् । ट्विटरमा सलमानका फ्यान उत्साहित छन् । उनको पहिलो चलचित्र ‘बीवी हो तो ऐसी’ ले हालै २९ औँ वर्ष पूरा गरेको छ ।
सलमान खानले रेखा र फारुख शेखको चलचित्रबाट बलिउडमा डेब्यु गरेका थिए । चलचित्रमा रेखा सलमानकी भाउजुको भूमिकामा थिइन् । यद्यपि सलमानको उत्कृष्ट लञ्च सुरज बडजात्याको चलचित्र ‘मैने प्यार किया’ ले दिएको थियो । ‘बीवी हो तो ऐसी’ सन् १९८८ मा रिलिज भएको थियो ।
सलमान खान जे गर्छन्, उनका फ्यान त्यसलाई पछ्याउँछन् । चाहे उनको भेषभूषा होस् वा ‘लुक्स’ सबै फ्यानमा ‘टे«न्ड’ बन्छ । विगत २८ वर्षमा सलमानले आफ्नो ‘गेटअप’ प्रत्येक पटक परिवर्तन गरेका छन् र उनका फ्यानले यसलाई मनपराएका छन् ।
सलमान खानको ‘हम आपके हैं कौन’ वाला ‘क्युट, जेन्टलमेन र चकलेटी’ लुक्सले उनका फ्यानमा धेरै वर्ष प्रभाव पार्यो । यस्तै उनको ‘तेरे नाम’ वाला ‘हेयरस्टाइल’ले स्कुल कलेजका विद्यार्थीमा गहिरो प्रभाव पार्यो । सबैभन्दा गज्जबको कुरो सलमान खानको ‘ब्रासलेट’ स्टाइल आजसम्म पनि उनका फ्यानका हातमा देख्न सकिन्छ ।
सलमान खानको क्रेज र फलोइङ फ्यानमा निरन्तर रहिरहेको छ । आज बलिउडमा सलमान खान सुपरस्टार छन् । सुपरस्टारका ‘सुपरफलोअर्स’ पनि कम छैनन् ।
‘जनअपेक्षा छिट्टै पूरा हुनेछन्’